China OEM 30639780 na 30639781 CONTROL ARMS Maka VOLVO -Z5148 ndị na-emepụta ihe na ndị na - eweta ya | TANGRUI
OEM 30639780 na 30639781 Nchịkwa Aka maka VOLVO -Z5148
GN BMS AKWOLKWỌ ​​NDMS NA-ACH IM AKW IMKWỌ?
Ogwe aka na-enye njikọ na isi ihe dị n'etiti nkwụsịtụ ụgbọ gị na ụgbọ ala gị. A na-ejikọ a ntu nkwonkwo ụkwụ na ahụ etiti, akara ogwe aka atụmatụ bọl nkwonkwo na bushings nke na-arụ ọrụ na tandem idowe ziri ezi wheel nsuso na ọnọdụ. Dịka ọmụmaatụ, ogwe aka nchịkwa dị ala na-enyere aka ịtọ ntọala ogologo na akụkụ nke wiil ahụ mgbe ụgbọala ahụ na-agagharị.
Control ogwe aka iguzogide a ọtụtụ nke loading agha, dị ka osooso / braking, cornering mgbe mbịne na kwụsịtụrụ arọ nke ụgbọala ahu. Ha nwekwara ọrụ ọzọ nke ijigide mgbatị ụkwụ ike. Nke a na - ebelata ụda a na - ebufe, ịkwanye okporo ụzọ na ịma jijiji mgbe ị na - enye nguzogide mmegharị nkwanye achọghị.
Dabere na nhazi nkwusioru (Multi-Link, MacPherson, Double Wishbone), ogwe aka na-achịkwa nwere ike ịdị na nkwụsị ihu na azụ, na ọnọdụ elu na nke ala.
Site na ijikọta nkwụsịrị aka ekpe na aka nri nke ụgbọ ahụ na mmanya na-eme ka njigide, njikọ ndị na-eme ka njigide na-echekwa wiil ndị ahụ n'otu ogo ahụ ma belata mpịakọta ahụ.
Kedu ihe na-eme ka ogwe aka anyị dị ukwuu? Tangrui na-enye ndị ọrụ ntanetị ọrụ aka, site na ịmepụta ihe ọ bụla na-achịkwa ogwe aka. Ná nkezi, ịwụnye ogwe aka anyị na-ewe 30% obere oge n'ihi na etinyelarị bọọlụ na bushings. Ndị injinia anyị na-elekwasị anya na ime ka akụkụ anyị dị mfe ịwụnye ma wuo iji nye ndụ ogologo oge. Na-enye ntaramahụhụ ntachi obi na-ata ahụhụ, anyị na-akwado ụdị ọhụụ ọhụụ ọ bụla iji hụ na ị ga-arụ ọrụ ị nwere ike ịtụkwasị obi.
Front Axle, Aka ekpe, VOLVO XC90 VOLVO [03-11]
N'ihu ihu, aka nri, obere VOLVO XC90 [03-11]
Akara Maka VOLVO
Nke gara aga: OEM BS1A-34-350 BS1A-34-300 ARM SITE Aka Mazda -Z5147
Osote: Ogwe njikwa njikwa ogo dị elu OEM 54500-3S000 Maka HYUNDAI SONATA-Z5149
Mgbatị Ngwaọrụ Njikwa
Ogwe aka Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ
Ogwe njikwa Tubular
ARLỌ AKA NA-EME TOYOTA-Z5144
OEM TD11-34-300B na TD11-34-350B TRB ARR AR MSLỌ ...
Tangrui ngwaahia Control Ogwe aka Adabara N'ihi ...
Hight Ogo Control Ogwe aka OEM 54500-3S000 Fo ...
8E0407510A ịchịkwa ogwe aka N'ihi Volkswagen Passat-Z ...
Front Kemeghi Upper Control ogwe aka Adabara ụfụfụ ...
Shock Absorber kpọchie, Ogige Ulo, Shock Absorber Rubber, N'iru n'iru Knuckle, Taya Ball Joint, Hood Shock Absorber,